BBC'n tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo fi Amaaraa bara 2017 eegala - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured BBC’n tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo fi Amaaraa bara 2017 eegala
Baatii muraasa booda Afaan Oromoo BBC irraan dhaggeeffachuu fi odeeffannoo madaalawaa ta'e argachuuf deemna
Dhaabbanni Tamsaasa Biriitaaniyaa (BBC’n) tamsaasa raadiyoo gara Itoophiyaatti eegaluuf karoorfate Afaan Oromootiinis kan dabarsu ta’uun isaa beekame. Karoora kana keessatti Afaan Amaaraa fi Tigrees ammatamaniiru. Kana jechuun tamsaasni BBC naannoo Gaafa Afrikaatti Afaan Oromoo, Amaaraa, Somaalee (yeroo dheeraadhaaf ture) fi Tigreen (Itoophiyaa fi Eertiraa) darba jechuudha.
Karroorri BBC haarofni kuni kan agarsiisu dhaabbanni Biriitaaniyaa kuni tamsaasa isaa gara Naayjeeriyaatti afaan sadiin (Igboo, Pidignii fi Yurubaan), akkasumas gara Hindiitti afaan afuriin (Gujaraati, Maraatii, Punjaabii fi Telguun) kan dabarsu ta’uu isaati. Tamsaasni Afaan Kooriyaas bara 2017 keessa akka jalqabu beekameera.
BBC’n ukkaamamiinsa miidiyaa wolabaa fi hir’ina dimokraasiitu jira jechuudhaan tamsaasa kallattiidhaan Gaafa Afrikaa irratti xiyyeeffate dabarsuuf kan karoorfate. Yeroo BBC’n labsii isaa ifa godhetti afaan kamiin akka dabarsu ifa hin goone ture. Oromoon heddu sodaafi yaaddoo Afaan Oromoo nidagatama jedhuun sagalee wolitti qabuudhaan BBC irratti dhiibbaa godhaa turan. Dhiibbaa moo jalqabumaa BBC’n karoora Afaan Oromoon tamsaasuu qaba? Wanti beekame hin jiru. Wanti ammatti beekame yoo jiraate, garuu, BBC’n Afaan Oromootiin kan tamsaasu ta’uu isaati. Kuni Oromoo fi kanniin Afaan Oromoo dubbatan hundaaf gammachuu fi injifannoo guddaadha.
BBC’n karoora ‘dimokaarsii utubuu’ baafate kanaan naannoon xiyyeeffannaa Kooriyaa Kaabaa, Itoophiyaa, Eertiraa, Ruusiyaa fi Jiddugala Bahaati. Akka karoora kanaatti namoonni wolakkaa biliyoonaa saganataa BBC kanatti fayyadamoo ta’u.
‘Odeeffannoo dhugaa, haqaqabeessaafi kan hin loogne ummata biraan gayuudhaan murannoo dimokraasii utubuuf qabnu haaromsina,’ jedhe Lord Hall, Daayireektariin BBC.
BBC’n tamsaasa televiziyoonaa fi raadiyoo gara Somaaliyaa, Hindii, Naayjeriyaa fi Taayilaand dabarsu kan daran cimsu ta’uus ibseera.
Afaan Oromoo fi Ingiliffaa dabalatee BBC’n afaan 40 tamsaasa raadiyoo fi televiziyoonaa kan kan dabarsu ta’uun beekmaeera.
Previous articleItoophiyaan uggura intarneetiin addunyaa irratti 3ffaadha; uggurri intarneetii guyyatti doolaara miliyoona 4.3 isii dhabsiisa
Next articleSeektariin turizimii jeeqamuun isaa kasaaraa diinagdee dhaqqabsiisuu fi Woyyaanee sharafa biyya-alaa dhabsiisuun beekame